Pan Bay Dah ပန်း ဗေဒါ Water Hyacinth Flower: Condition of the Political Prisoners Seriously Deteriorate
Condition of the Political Prisoners Seriously Deteriorate
Source: Dr. Lun Swe:
Burmese Bloggers, Your Help is much Needed !
The condition of Political Prisoners at Insein Prison is Seriously Deteriorating, all the media and the blogs please spread this news as much as possible and as soon as possible, to get the world wide attention for taking action and help.
(This was requested by Political Prisoners Watch Group inside Burma.)
At Blk 1, Ko Minn Ko Naing, Ko Jimmy, Ko Tin Htu Aung, Ko Zaw Lin Aung, Ko Myo Thant and Ko Kap Khan Khual are held together with others criminals and also with Kywe Gyi aka Khin Maung Thaik (acrminal who committed murder2times ) who was appointed as the supervisor of that Blk 1.
At Blk 2, Ko Ko Gyi, Ko Mya Aye, Ko Myo Khin aka Mone Khet and Ko Kyaw Kyaw Htwe aka Mar Kee are held together with the criminals who are on death row.
At Blk 3, Ko Dee Nyein Linn and Ko Thein Swe are held together with the criminals who are on death row.
At Blk 5, Ko Htwe Kywe is held together with other 30 criminals.
At Prison Hospital, Ko Hla Myo Aung and Ko Htin Kyaw are held together with ex army officer Hla Win Aung who is already mentally abnormal and another mad criminal.
Ko Myo Khin is going to sentence under Section 505/143 and Ko Thein Swe is going to sentence under Section 6.
Posted by Dr. Lun Swe 1:35am
(Disclaimer: I translated the original post as best as possible to the original Post with my best intention. .. Thank you.. Bay Dah)
Original Post in Burmese:
အင်းစိန်ထောင်တွင်း၌ အထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ အခြေအနေများ အထူးဆိုးရွားနေကြောင်း နိုင်ငံတကာမှ သိရှိစေရေးအတွက် အောက်ပါ သတင်းမှန်များကို မီဒီယာများမှ အမြန်ဆုံး ကူညီရေးသား ထုတ်လွှင့်ပေးကြပါရန် ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အခြေအနေ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
ထောင်မကြီး တိုက်ကြီး(၁)တွင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုတင်ထူးအောင်၊ ကိုဇင်လင်းအောင၊် ကိုမျိုးသန့်၊ ပတ်ခမ်းကွာ တို့အား အခြားရာဇ၀တ် အကျဉ်းသားများနှင့် အတူထားရှိပြီး ထောင်ထဲတွင်ပင် လူသတ်မှုနှစ်ခါ ကျူးလွန်ထားသည့် ကျွဲကြီး (ခ) ခင်မောင်သိုက်ကို ထိုတိုက်ကြီး(၁)၏ တန်းစည်းခန့်ထားကြောင်း သိရသည်။
တိုက်ကြီး(၂)တွင် ကိုကိုကြီး၊ ကိုမြအေး၊ ကိုမျိုးခင် (ခ) မုန်းခက်၊ ကျော်ကျော်ထွေး (ခ) မာကီး တို့အား သေဒဏ်ကျထားသည့် ရာဇ၀တ်သားများနှင့်၎င်း၊
တိုက်ကြီး(၃)တွင် ဒီငြိမ်းလင်း၊ ကိုသိန်းဆွေ တို့အား သေဒဏ်ကျထားသည့် ရာဇ၀တ်သားများနှင့်၎င်း၊
(၅)ဆောင် (၂)တိုက်တွင် ကိုဌေးကြွယ်အား အခြားအကျဉ်းသား (၃၀)နှင့်၎င်း၊
ထောင်ဆေးရုံတွင် ကိုလှမျိုးနောင်နှင့် ကိုထင်ကျော် တို့အား စိတ်ဖောက်ပြန်နေသည့် စစ်ဗိုလ်ဟောင်း လှဝင်းအောင်၊ အခြားအရူးတယောက်တို့နှင့်၎င်း အတူရော၍ ထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကိုမျိုးခင်ကို ပုဒ်မ ၅၀၅၊ ၁၄၃ တို့နှင့်၎င်း၊ ကိုသိန်းဆွေကို ပုဒ်မ ၆ခုနှင့်၎င်း တရားစွဲထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 1:35 AM
Posted by ဗေ ဒါ Bay Dah at 1:30 PM
E-Moe and his Satllite Dish (Cartoon)
Long Peace Walk; Lastest Update for the Day No.3 (...
Burmese Activist was called up by Singapore Police...
Long Peace Walk Update (Third Day)
Condition of the Political Prisoners Seriously De...
Burmese Monks Long Peace Walk Update